Wiilasha Xun 3, Soul, The Banker iyo in ka badan - BGR - WAA KU SAMEEYAAN
ACCUEIL » madadaalo Wiilasha XXXX, Soul, The Banker iyo inbadan - BGR
Wiilasha Xun 3, Nafta, Bangiga iyo Waxbadan - BGR
Haddaad u dhimaneyso inaad aragto taxane ah iftiinkiis Hagaag, halkan waa usbuuca uu u aaday filimada. iyo Hurdo dhakhtar ayaa heshay dib u eegisyo badan oo togan oo muujinaya in filimku waajib ku yahay taageerayaasha sheekooyinka Stephen King. Majaajillo kale oo Kirismas ah ayaa cinwaan looga dhigay Kirismaskii ugu dambeeyay oo ay kujirto hooyada jiidaya, ayaa sidoo kale toddobaadkan laga heli karaa shineemo.
U halgamaya guushii xafiiska sanduuqa filimku waa filimkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee leh karti iyo madadaalo, Xiddiga Roland Emmerich Midway . Haddii aad rabto inaad daawato filim ku yaal guryo badan oo mashquul ah dhammaadka toddobaadkan, waxaad ogaan doontaa filimmo badan oo cusub oo ku qulqulaya Netflix, oo ay ku jiraan Ha Barafto Ciidaha duurjoogta ah  iyo Boqorka - tan ugu dambeysay waxaa la daabacay usbuucii hore waana ay aad uga fiican tahay sidii aan filaayay. Intaa waxaa sii dheer, dhowr barnaamijyo Apple TV + ah ayaa helay qaybo cusub iyo Disney + oo la bilaabi doono maalmo gudahood.
Haddii aad daawaneyso filimka ama haddii kale, waad ku raaxeysan kartaa. Radi-yaasha ugu dambeysa, oo ay ku jiraan clip cusub oo loogu talagalay Badboys 3 iyo sidoo kale Pixar's trailer ugu horeeya ee kan xiga Soul . Trailer-kii ugu horreeyay ee filim asal ah Apple, Bankiga iyo sidoo kale laba filim oo laga daawan doono Netflix mustaqbalka, sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay hoosta. Waxaan fiiro gaar ah siin lahaa Labada popes oo ay wehliyaan Jonathan Pryce iyo Anthony Hopkins.
Badbaadada Nolosha Nolosha
Ninka aan muuqan
Sheekada ka hor Christmas
Goorma ayay sax ahaan tahay Disney + internetka? - BGR
Marvel wuxuu xaqiijiyay soo noqoshada halyeey dhintay, xalinta mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu dambeeyay Endgame - BGR
La-shaqeynta Afrika: Maxay hogaamiyayaasha Afrika ku casuumeen Angela Merkel saxiixa Berlin? - YoungAfrica.com
Morgan Freeman wuxuu gurigiisa 50 hektar u beddelay goob weyn oo lagu keydiyo shinnida - SANTE PLUS MAG
TALOOYINKA: 35 HACKS MA OGTAHAN KARO
ASSE: Barça wax deeq ah ma samayso, Saint-Etienne mar hore way baxday - FOOT 01
"Cidna" kamahadlo Harry iyo Meghan - dadka
Cameroon - Job Offers304
DADKA & LIFESTYLE7,817
TECH & TELECOM2,631
Video dheeraad ah3,610